ရေကျောက် နဲ့ မျောက်ကျောက် မတူပါဘူး။ - Hello Sayarwon
အခုတလော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ တော်တောများများမှာ မျောက်ကျောက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီမျောက်ကျောက်ရောဂါဆိုတာက ရေကျောက်လိုပဲ အရေပြားမှာ အဖုအပိမ့်လေးတွေ ထွက်တာဖြစ်တာကြောင့် မျောက်ကျောက်ကို ရေကျောက်နဲ့ အတူတူပဲလို့ ထင်နေတာမျိုးတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ရေကျောက် နဲ့ မျောက်ကျောက် မတူပါဘူး။ ဘယ်လို မတူတာလည်း သူတို့ ၂ ခုကြားက ကွာခြားချက်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။
ကျောက်ပါတာခြင်း၊ အရေပြားပေါ်မှာ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ၊ အနာစက်လေးတွေ ဖြစ်တာခြင်း တူပေမယ့် ရေကျောက် နဲ့ မျောက်ကျောက် မတူပါဘူး။ ဘာတွေများ ကွာခြားလဲဆိုတော့
ရေကျောက်ဆိုတာက ကလေးတွေမှာ တော်တော်လေးအဖြစ်များတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ တစ်ရပ်ပါ။ ရေကျောက်က ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ varicella-zoster virus ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ကတော့ ရေကျောက် ဖြစ်တဲ့အခါ
ဗိုက်အောင့်မယ် စတဲ့လက္ခဏာတွေက ရက်အနည်းငယ်ကြာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုကနေတဖြည်းဖြည်း ကိုယ်အပူချိန်က ၁၀၁ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ကနေ ၁၀၂ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဗိုက်၊ ရင်ဘတ် နဲ့ မျက်နှာတို့မှာ ယားယံတဲ့ အနီရောင်အဖုအပိမ့်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုကနေ ခန္ဓာကိုယ် နေရာအနှံ့ကို ပြန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဦးရေပြား၊ ပါးစပ်အတွင်းပိုင်း၊ လက်မောင်း၊ ခြေထောက်တွေ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံကိုပေါ့။
အဖုအပိမ့်တွေဟာ စဖြစ်ကာစမှာ အနီရောင်အဖုသေးသေးလေးတွေဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံ ဒါမှမဟုတ် အင်းဆက်ကိုက်ခံရတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ ၂ ရက်ကနေ ၄ ရက်လောက်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကနေမှာ အရည်ကြည်ဖုလေးစဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီအရည်ကြည်ဖုတွေပေါက်သွားတဲ့အခါမှာ အနာလေးတွေလို စဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုကနေ အနာတွေဖြစ်လာပြီး ခြောက်သွားတဲ့အခါ အညိုရောင် အနာဖေးတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့သူတွေမှာ ပိုပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ ရေကျောက်က ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီး ကာကွယ်လို့ ရပါတယ်။
ရေကျောက်က ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ ကူးစက်ခံရပြီးတဲ့နောက် ၂ ပတ်လောက်ကြာမှ ရောဂါလက္ခဏာ စပြလေ့ရှိတာပါ။
ရေကျောက် ကူးစက်နိုင်ခြေ အများဆုံး အခြေအနေက အနီရောင် အဖုအပိမ့်လေးတွေကနေ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ ဖြစ်မလာခင် ၂ ရက်လောက်အလိုမှာပါ။ ကာကွယ်ဆေး မထိုးထားသူတွေဆီကိုသာ ကူးစက်တာဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေကိုတော့ မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။
ရေကျောက်က ကူးစက်လွယ်တာကြောင့် ရေကျောက်ဖြစ်နေချိန်မှာ သီးခြားနေတာက အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းပါ။ အရည်ကြည်ဖုတွေ အားလုံးခြောက်သွားပြီး တစ်ပတ်လောက်ကြာမှ အခြားသူတွေနဲ့ ထိတွေ့မှု လုပ်သင့်ပါတယ်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါ ဆိုတာက မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ဖြစ်ခဲတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်က Poxviridae ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးရင်းဝင် ဖြစ်ပြီး Orthopoxvirus ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစုဖြစ်ပါတယ်။ Orthopoxvirus မျိုးစုထဲမှာ ကျောက်ကြီးရောဂါဖြစ်စေတဲ့ Variola ဗိုင်းရပ်စ်၊ ကျောက်ကြီးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ vaccinia ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ နွားကျောက် ဗိုင်းရပ်စ်တို့ ပါဝင်နေပါတယ်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါကို 1958 ခုနှစ်က သုတေသန လုပ်ဖို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ မျောက်တွေမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် မျောက်ကျောက်လို့ အမည်ပေးခဲ့တာပါ။
မျောက်ကျောက်ရောဂါက 1970 ခုနှစ်မှာ ကွန်ဂို ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ [Democratic Republic of the Congo (DRC) ] မှာ လူတွေမှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
လူသားတွေမှာ ခံစားရတဲ့ မျောက်ကျောက်ရောဂါ လက္ခဏာတွေက ကျောက်ကြီးရောဂါ လက္ခဏာတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပေမယ့် ကျောက်ကြီးရောဂါလောက်တော့ မပြင်းထန်ပါဘူး။ မျောက်ကျောက်ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီဆိုရင် ရောဂါ ကူးစက်ခံရပြီး ၇ ရက်ကနေ ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာ ပြနိုင်သလို ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ၅ ရက်ကနေ ၂၁ ရက်အတွင်းမှာ လက္ခဏာ ပြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရပြီဆိုရင် အစောပိုင်း ကာလမှာ
နောက်ကျောတွေ ခါးတွေ နာတာ
ခြေကုန်လက်ပမ်းကျတာ၊ မောပန်းလွယ်တာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အဖျားဝင်ပြီး ၁ ရက်ကနေ ၃ ရက်အတွင်းမှာ
အဖျား ဆက်ရှိနေတာနဲ့ အတူ အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်လာမှာပါ။ မျက်နှာမှာ စထွက်တတ်ပြီး ဒီကနေမှ ခန္ဓာကိုယ် အခြား အစိတ်အပိုင်းတွေဆီ ပြန့်သွားပါတယ်။
ဒီလို အဖုအပိမ့်တွေ ထွက်လာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ နောက်ထပ် အဆင့်တွေအနေနဲ့
ပြည်တည်နာလို ပြည်ဖုလေးတွေ ဖြစ်လာတာ
အနာတွေ ဖြစ်လာတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ မျောက်ကျောက်ရောဂါကို သီတင်းပတ် ၂ ပတ်ကနေ ၄ ပတ်လောက်အထိ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ၄ ပတ်လောက် အကြာမှာ ပြန်သက်သာသွားတာမျိုး ရှိပါတယ်။ အာဖရိကမှာတော့ မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ ၁၀ ဦးမှာ ၁ ဦးလောက် သေဆုံးတာမျိုး ရှိပါတယ်။
ကျောက်ကြီးကာကွယ်ဆေးက ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ရာနှုန်းပြည့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ရေကျောက် နဲ့ မျောက်ကျောက် မတူကွဲပြားချက်များ
ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ varicella-zoster virus ကြောင့် ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်။
ရေကျောက် ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသူတွေမှာ မဖြစ်ဘူး။
အဖုအပိမ့်တွေက ရင်ဘတ်၊ ကျောစတာတွေမှာ စပေါက်တယ်။
အနီရောင် အဖုအပိမ့်လေးတွေကနေ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ ဖြစ်မလာခင် ၂ ရက်လောက်အလိုမှာ အကူးအများဆုံးဖြစ်တယ်။
ချွဲတွေ၊ သွားရည် နဲ့ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေကနေ ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တယ်။
ကလေး၊ လူကြီးမရွေး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။
ကာကွယ်ဆေး မရှိသေးပါဘူး။ ကျောက်ကြီးကာကွယ်ဆေးက ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ရာနှုန်းပြည့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်က Poxviridae ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးရင်းဝင် ဖြစ်ပြီး Orthopoxvirus ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစုဖြစ်ပါတယ်။
မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူ ၁၀ ဦးမှာ ၁ ဦးလောက် သေဆုံးတာမျိုး ရှိပါတယ်။
လူအချင်းချင်း ကူးစက်နိုင်သလို တိရစ္ဆာန်ဆီကနေလည်း လူဆီကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာမှာ စထွက်တတ်ပြီး ဒီကနေမှ ခန္ဓာကိုယ် အခြား အစိတ်အပိုင်းတွေဆီ ပြန့်သွားပါတယ်။
ရောဂါပိုး ပေကျံနေတဲ့အရာတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့အရည်တွေနဲ့ နှချေ၊ ချောင်းဆိုးတာကနေ ထွက်လာတဲ့ အမှုန်တွေကနေတဆင့် ကူးစက်ပါတယ်။
Human monkeypox: confusion with chickenpox https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2907258/#:~:text=3.3%25%20of%20human%20monkeypox%20cases,diagnosis%20could%20not%20be%20established. Accessed Date 24 May 2022
About Monkeypox https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/about.html#:~:text=Monkeypox%20is%20a%20rare%20disease,vaccine)%2C%20and%20cowpox%20virus. Accessed Date 24 May 2022
Monkeypox https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html Accessed Date 24 May 2022
Monkeypox https://www.nhs.uk/conditions/monkeypox/ Accessed Date 24 May 2022
Chickenpox https://www.nationwidechildrens.org/conditions/chickenpox Accessed Date 24 May 2022
Chickenpox https://kidshealth.org/en/parents/chicken-pox.html Accessed Date 24 May 2022